Amathoyizi - iSearch
Izingane zithanda amathoyizi - akukho mbuzo. Ngesikhathi esifanayo, abafuni kakhulu ukukhetha amathoyizi abo. Izinto ezilula zokupakisha ngokuvamile zanele ukudala isikhiye esihle kakhulu sephrinta noma isikhala sokuhlola i-rocket enengqondo eminingi yengane. Abazali, yiqiniso, babona okuhlukile. Bakulindele ithoyizi elicubungulwa kahle futhi eliqinile, elinomthelela omuhle ekuthuthukiseni futhi alikho izakhiwo ezilimazayo. Kodwa yikuphi okudlala ngokukhethekile okufanelekayo yiliphi iqembu lobudala futhi ligcine lokho okushiwo umakhi?
Ukunikezwa kwamathoyizi kunkulu. Kuzo zonke izinsuku, izithakazelo, ezinkulu nezincane uzothola namuhla ukunikezwa okuningi. Yingakho sithola kunzima ukukhetha ithoyizi elifanele labantwana bethu. Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi isizukulwane, imibono ehlukene ikhona mayelana nokuthi yiluphi uhlobo lwetheyibhile olubaluleke kakhulu. Abanye bacela amathoyizi enziwe ngamapulangwe, abanye badumisa izinzuzo zamathoyizi epulasitiki angenakonakala. Abazali, abagxila ekukhethweni kwamathoyizi ekusebenzisaneni okuvamile komzali nengane, babheka ngokungenalutho kulabo abathintekayo ikakhulukazi ngokuqashwa okuzimele kwengane yabo enhliziyweni. Ngaphezu kwalokho, kunezithoyizi zokudlala amazambane ombhede nokuthi yiziphi izithameli, amathoyizi aphezulu, ithoyizi elithambile, iseknoloji-esekelwe futhi, okumele ikhuthaze amakhono amakhono noma amakhono. I-bandwidth ayenze kube lula.
Ngokuqondile ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile ukuqondiswa ngokuyinhloko yizintandokazi nezintshisekelo zengane, kunokuba ugcwalise izifiso zakho zobuntwana ngezipho. Ubudala kanye nesigaba sokuthuthukiswa kwengane kufanele kucatshangelwe uma ukhetha ithoyizi efanele. Phela, akukho okukhungathekisa kakhulu kunokuqeda umdlalo noma ithoyizi lapho amakhono akho akwanele khona. Ngokungafani nalokhu kuyinto yokudlala eyinselele ingane. Khona-ke isithukuthezi asinakugwenywa.
I-orientation enhle yokuthola ithuba inikeza ukubuka ngezigaba zokuthuthukiswa eziqondene nesikhathi. Ngesisekelo samakhono okuqeqesha, izithakazelo ezihambisana nomdlalo zingatholakala:
Njengoba izingane ezinyangeni ezimbili zokuqala zidinga kuphela ukuqaphela indawo yazo entsha futhi zidinga ukuthula ukucubungula izinto ezintsha ezinjengokukhanya, amazwi, imisindo namafutha, amathoyizi kulesi sigaba sokuthuthuka angase abe yikhukhula eshukumisayo. Ngakho-ke ayingqayizivele.
Kusukela ezinyangeni ezingaba ngu-3 ingane iqala ukubona indawo eyayiyindawo eyengeziwe. Manje ujabulela imisindo yansuku zonke nezingoma ezilula. Phakathi nalesi sikhathi, kuyoba nesithakazelo esikhulu emigqumeni, e-griffling, mobiles kanye nomculo othobekile.
Ngezinyanga ezingaba ngu-6 umntwana uhamba ngokuya. Ingabamba ikhanda ngokuphepha futhi iqala ukuyibeka. Uthola izinyawo nezandla zakhe futhi ujabulele konke okungenziwa ukunyatheliswa yisenzo sakhe. Manje yisikhathi esifanele sebhola, ukubeka emibhoshongweni noma amabhlokhi wokwakha.
Njengoba cishe izingane zonyaka we-1 ziqala ukuhlola umhlaba ngezinyawo zazo. Manje konke kuyatholakala njengethoyizi, elingahanjiswa noma eliphoqelelwe. Ngezimoto zokuqala, ukudonsa nokudonsa amathoyizi namadonsa, ingane izojabula kakhulu kule minyaka.
Abaneminyaka emibili banenjabulo enkulu yokuhlola nokuphinde baqoqe izinto ukuze bahlole ukuthi basebenza kanjani. Balingisa imisebenzi yabantu abadala futhi bafuna ukwenza konke ngokwabo. Ama-puzzle, izinsimbi zokuqala zomculo, amathoyizi kanye namathoyizi enhlabathi kukhona amathoyizi afanele izingane zaleli qembu lobudala.
Izingane ezisuka eminyakeni engu-3 zinesifiso esinamandla sokuhambisa. Bayakhuphuka, bagxume futhi bathande izimoto zazo zonke izinhlobo. Bakha izindawo zemidwebo yabo yemidlalo futhi bayakujabulela njalo ukudlala ngemidlalo eguqa. Izingane zalesi sizwe zishisekela ngamabhawundlu, abagijimi bebhola kanye nezibalo zokudlala.
Kusukela eminyakeni engu-4 kuya ku-5, izingane zithola ushintsho olusha lwentuthuko ekukhulumeni kwabo nezilimi zamakhono. Bathanda imidlalo yokunyakaza, i-beading ubuhlalu namageyimu omphakathi.
Ezinganeni ze-5 ubudala ukunyakaza sekuvele kuhlelekile kahle. Bangakwazi futhi ukuhlala isikhathi eside isikhathi eside bese begxila kubo. Iningi lezingane kule minyaka liyancipha futhi lizama.
Kusukela eminyakeni yobudala yesikole, izingane zidinga isinxephezelo sokuhlala isikhathi eside nokulalelisisa ekilasini. Imishini yezemidlalo efana nama-roller skates kanye nama-unicycles kamuva akhuthaza ukuxuba futhi ahlangabezane nomshini wabo ohambelana nokunyakaza. Amakhono amakhono emoto manje aqeqeshwe kahle futhi avame ukujabulela ukudweba noma ukwakha. Amabhokisi okuhlola nawo afanelekile kusukela esikoleni esiphansi esikoleni.